Daawo:- Rw xigeenka dalka “Shacabka somaliland cod baa laga qaadayaa si goaankooda loo xaqiijiyo”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Rw xigeenka dalka “Shacabka somaliland cod baa laga qaadayaa si goaankooda loo xaqiijiyo”.
July 31, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 1
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya
Mahdi M. Gulaid ayaa sharxaya midnimada Soomaaliya sida ay lagama maarmaan utahay.
Waa muhiim in miiska wadahadalka la isugu yimaado oo wada-hadal dhab ah la galo, lagana doodo hannaanka ugu habboon ee looga shaqeyn karo danaha iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Hadalka ah shacabka reer soomaalilaan cod baa laga qaadayaa lama joogo wakhtigeedii.Sababtoo ah reer soomaalilaan waxay badiba taagaan yahiin anagu ka mid ma nihin soomaalida kale.
Tan kale haddiiba ay inta badan reer soomalilaan yiraahdaan waxaan wax la qabaynaa sooomaalida kale meeday dawlada la raacaa ee wax u qaban karta soomaali oo dhan?War xamar hadda dawladi kama jirto oo inta badan waxaa maamusha shabaab.Saas darteed maanta xamar kama jirto dawla macne leh oo ay raaci karaan shacabka soomaalilaan ee yaan dadka been loo sheegin.Reer soomaalilaan xiligaan halkoodaa u nabad roon.